Efa manana ny vidin'ny Galaxy Note 9 izahay any Eropa | Androidsis
Ho avy ny fampisehoana ny Galaxy Note 9. Ny Samsung high-end vaovao dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 9 Aogositra, na dia misy antsipiriany bebe kokoa aza rehefa manakaiky ity daty ity. Ka vitsy ny tsiambaratelo momba izany. Ny iray tamin'izy ireo dia ny vidiny mety ho azon'ilay fitaovana rehefa natomboka tamin'ny tsena eropeana izy io, saingy toa efa ananantsika io angona io
Ny avo lenta an'i Samsung dia nisondrotra tamin'ny vidiny tamin'ny taon-dasa, zavatra tsy naharesy lahatra ny mpampiasa rehetra. Fa toa ity Galaxy Note 9 ity dia hanana fiakaran'ny vidiny indray, farafaharatsiny araka ny famoahana vaovao.
Amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa hisy fampiasa roa farafahakeliny finday amin'ny resaka fitehirizana anatiny. Ny iray amin'izy ireo dia hanana 128 GB ary ny iray hafa 512 GB. Ireo roa ireo no efa naseho, na dia tsy lavina aza fa mbola misy maromaro. Ary amin'ireo roa ireo dia efa manana ny vidiny farany isika.
Ny andiany 9 GB an'ny Galaxy Note 128 dia mitentina 1.029 euro, fiakarana kely amin'ny vidiny raha oharina amin'ny maodely tamin'ny taon-dasa. Na dia lafo kokoa aza ny kinova avo lenta miaraka amin'ny 512 GB, manana a vidiny 1.279 euro. Mety misy firenena izay mety miovaova ny vidiny.
Saingy ireto no vidiny antenaina hananana an'ity telefaona ity amin'ny fahatongavany eny an-tsena any Eropa. Tsy mora izy io, ary nihoatra ny sakana 1.000 euro natahotra ny maro. Maneho fiakaram-bidy izany raha oharina amin'ny maodely tamin'ny taon-dasa. Ny Galaxy Note 9 dia antenaina ho lafo kokoa.
Ho hitantsika raha ireo ny vidin'ny tsena rehetra any Eropa. Na dia kely aza ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny telefaona Samsung any Eropa. Manantena izahay fa hanana fanamafisana momba ny vidin'ny Galaxy Note 9 tsy ho ela. Ahoana ny hevitrao momba ireo vidiny ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny vidin'ny Galaxy Note 9 dia nambara tany Eropa
MarcoDroid dia hoy izy:
Ka misy dikan-telo. Izany no ilazako azy satria amin'ny sary tena izy misy ilay fitaovana eo akaikiny dia ilay boaty ary azonao jerena ao ambadiky ny fika sy ny galaxy note 9 ary avy eo milaza fa 6G ny fahatsiarovan-tena ary 64 ny fahaizan'ny ROM. Mitovy amin'ny mahazatra ihany .. ary ny sary dia original .. tsy misy fika ..
Mamaly an'i MarcoDroid